Kellogg ၏ကျန်းမာရေးအစ | JPMA, Inc
ဖိအားအများကြီးမိဘတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကြွလာနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျ "ပြီးပြည့်စုံသော" ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကျော်ကအလွယ်တကူထွက်အလေးပေးနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာလည်းမရှိဘာမှန်း! ဒါကြောင့်သေချာသငျသညျဆင်နွှဲစေနှင့်သင့်မိသားစုကြီးထွားလာသကဲ့သို့သင်တို့ကိုခံစားမယ်သူအပေါငျးတို့အနည်းငယ်သာအောင်မြင်မှုများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြွေးပေး! ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသူကသင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်အရာကိုထွက်ရှာဖွေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာပြထားတဲ့စီရီရယ်ဟာ WIC အစီအစဉ်တွင်ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးစီရီရယ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အားလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အရွယ်အစားတိုင်း WIC အစီအစဉ်တွင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်, စိတ်ကိုထား။ သင်၏သီးနှံများကိုသင်၏ WICShopper စကင်နာဖြင့်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပြီး၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်!
ငါတို့သည်လည်းအတူတူထားပါတယ် အချို့သောပျော်စရာ, သာမန်ချက်ပြုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သင့်ရဲ့လမ်းထွက် hack ဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကုန်ကျ
မင်းလက်တွေပြည့်နေပြီ Kellogg's သည်သင့်ကလေးများအတွက်ထိပ်ဆုံးတွင်အဟာရကောင်းစေရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များပါသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
ပြောင်းဖူးအလွှာ Love နှင့်သင့်တဲ့အစားအစာကိုပိုမိုဖိုင်ဘာကိုထည့်သွင်းဖို့ရှာဖွေနေ? သင်တို့အဘို့အရသာနှင့်အာဟာရ၏ညာဘက်ချိန်ခွင်လျှာရှာနေရပြောင်းဖူးအလွှာများနှင့်ဖွဲနုဂျုံအလွှာရောထွေး
အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရသတင်းအချက်အလက်အဘို့, ခရီးစဉ်ကို healthybeginnings.com.
မုန်ညင်း-လိမ္မော်ရောင် Sauce နှင့်အတူ Jamaican ကြက်သား Fingers
သရက်သီးသည်ဤကြက်သားလက်ချောင်းတစ်အရသာပူးတှဲပါစေ, ဒါပေမဲ့သူတို့ရာသီထဲမှာမနေလျှင်, လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အဆငျသငျ့နာနတ်သီးသို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ကဏ္ဍများကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါဟာသင်အကြိုက်ဆုံးရာသီနှင့်အတူလွယ်ကူရောနှောကြေမွပြောင်းဖူးအလွှာ။ ထို့နောက်ကြက်သားသို့မဟုတ်ငါးများကိုပေါ့ပါးစွာရိုက်ထားသောကြက်ဥအဖြူများထဲသို့နှစ်ပြီးပါ။ မှတဆင့်ချက်ပြုတ်ပြတ်သားသည်အထိမုန့်ဖုတ်။ ပျော် အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, healthbeginnings.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
ဆန်သီးနှံများကိုကြိတ်ခွဲပြီးငါးသားပေါက်များနှင့်အရသာရှိသောအသားကင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ငါးများ၊ မြေသားအမျှင်ကဲ့သို့သောအမဲသားအသားများအတွက်မူအမဲသားနှင့်အမျှင်ဓာတ်အနည်းငယ်မျှင်နှင့်ချိုသောအရသာတစ်မျိုးသို့အမျှင်ဓာတ်အနည်းငယ်ထည့်ရန်ကြိတ်ခွဲထားသောဂျုံမှုန့်များသို့မဟုတ်နှင်းခဲခွဲထားသောဂျုံများကိုထည့်ပါ။ အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, healthbeginnings.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
စပ် Bean ကိုဘာဂါ
ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့်ကြက်သွန်, ဤလွယ်ကူသော-to-စေ bean ကို Patti မှအရသာအများကြီးထည့်ပါ။ picante ငံပြာရည်သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဆာနှင့်အတူညစာအဘို့ထိုသူတို့အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
အလုံအလောက်မုန္လာဥနီကိတ်မုန့်မရနိုင်မလား? သို့ဖြစ်လျှင်ဤနံနက်စာပန်းကန်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာသီးနှံနှင့်ဒိန်ချဉ်ပန်းကန်ထဲမှာအစဉ်အလာအရသာပေါင်းစပ်။
လိမ္မော်ရောင်-Berry ဟာ muffins
Fall Spice မုန့ Dipper
ထို့နောက်ဆိ-approved ရေစာများအတွက်ဆန်သီးနှံမှာသူတို့ကိုလှိမ့်တစ်ဦး creamy မြေပဲထောပတ်သို့ကျဆင်းလာသို့ပြိုလဲချပ်လတ်ဆတ်တဲ့သစ်တော်သီးနှစ်ပါ။
ပြောင်းဖူး (သို့) ဆန်မှုန့်တစ်ခွက်ကိုဆီအနည်းငယ်နှင့်အတူသိုလှောင်ထားပါ။ ဥယျာဉ်သုပ်ဖြင့်အီတလီရာသီစမ်းပါ။ အနောက်တောင်ဘက်ကန်နှင့်အတူတစ်ခုခုအတွက် oregano, ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့် cumin ရောနှောပါ။ အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, healthbeginnings.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
quick နံနက်စာကြက်ဥနှင့်ပြောင်းဖူးအလွှာနှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကစပ်နှင့် jalapeno နှင့်အတူထိပ်တန်းလုပ်ပါ။
crunchy ပြင်သစ် Toast Sandwich
လက်တင်အရသာနှင့်အတူဖန်တီးမှုသီးနှံ toppings သုံးပြီးအားဖြင့်သင့်အာရုံ excite
ကုန်တယ်ထောပတ်သီးကိုကြီးစွာသောသီးနှံ topping စေသည်။ ဟုတ်တယ်၊ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြားခဲ့၊ လတ်ဆတ်သောဒိန်ချဉ်အနည်းငယ်သာရှိသောထိပ်တန်းပြောင်းဖူးအလွှာများ၊ ထောပတ်သီးထောပတ်သီးထည့်ပြီးသင်အပူနည်းနည်းရလိုပါကငရုတ်သီးမှုန့်သို့မဟုတ် cayenne မျဉ်းစောင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။ ဒီအဆာ, ချိုမြိန်ခြင်းနှင့် savory ပေါင်းစပ်မဆိုမုန့်ညက်ဘို့ကြီးသောအရသာ။ အခြားပေါင်းစပ်ထားသောအတွေးအခေါ်များ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ - healthbeginnings.com ။
ကျနော်တို့ကဒီလွယ်ကူပါတယ်, သစ်ကြံပိုး-အနံ့ဖျော်ရည်မှဆန်သီးနှံကဆက်ပြောသည်, ဆန်စိမ် horchata-အစားအောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်ခဲ့။
crunchy ငရုတ်သီး-Mac ကို Skillet ထိပ်ဆုံး
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနံနက်စာတွင် muffins အများစုကိုနှိမ့်ထားသောဖျက်ဆီးထားသောဂျုံ (သို့) ဖွဲနုအလွှာများကဲ့သို့သောအမျှင်ဓာတ်များစွာ သုံး၍ ဖုတ်ပါ။ နံနက်တိုင်းတွင်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ပူနွေးပြီးအပျော့ပြောင်းသည်အထိတစ်ကြိမ်လျှင်တစ်စက္ကန့် ၂၀ မျှမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တစ်ခုတပ်ပါ။ ထို့နောက် muffin ကိုထက်ဝက်မျှဖြတ်ပြီးလျှင်မြေပဲထောပတ်နှင့်ငှက်ပျောချပ်များ၊ ကြက်ဆင်နှင့်ဒိန်ခဲအချပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သစ်သီးများသိုလှောင်ထားရုံမျှဖြင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, healthbeginnings.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
အသီး, သီးနှံနှင့်နို့အားလုံးတဦးတည်းအရသာဖျော်ရည်ထဲသို့ blended ။
ဤသည် quiche တစ်ဦးတနင်္ဂနွေမနက်လည်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုညစာစားဘို့အအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံပြည့်စုံသည်ဘောဇဉ်များအတွက်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်သုပ်နှင့် crusty မြေတပြင်လုံး၌စပါးကိုလိပ်ထည့်ပါ။
Berry ဟာပြင်သစ် Toast ထိပ်ဆုံး
Parmesan Croutons နှင့်အတူပြောင်းဖူး Chowder ဟင်းချို
မြေပဲထောပတ် Cheesecake Dipper
ကြက်ဆင်နှင့်ဆန်အလွှာသီးနှံနှင့်ဖွဲ့ low-အဆီ meatballs
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်အတူတင်ဆောင် crispy cheesy မုန်
မြေပဲထောပတ်နှင့်အတူအနက်ရောင် Bean ကို Brownies
Zesty နှစ်ခုမိနစ် croutons
ခွက်သို့မဟုတ်နှစ်ချက်နေသောဖွဲနုအလွှာများသို့မဟုတ်နှင်းခဲခွဲထားသောဂျုံများကိုနှေးနှေးသောမီးဖိုချောင်သုံးသို့မဟုတ်ဒယ်အိုးထဲသို့ထည့်ထားသောကြင်နာတတ်သောစွပ်ပြုတ်သို့မဟုတ်ငရုတ်သီး။ အသေးစိတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, healthbeginnings.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
လျှပ်တပြက်အတွင်းချိုမြိန်သို့မဟုတ် savory toppings
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြောင်းဖူးအလွှာသို့မဟုတ် crispy ဆန်ကိုသုံးပါ အစားမုန့်အစအနများ၏ casseroles ချွတ်ထိပ်ဆုံးမှ Parmesan ဒိန်ခဲတစ်ဦးထိတွေ့နှင့်အတူရောနှော။ ဖုတ်ပန်းသီး, မက်မွန်သီး, သို့မဟုတ်အခြားနွေး, yummy ရယူထားသောချွတ်ထိပ်ဆုံးမှသစ်ကြံပိုးနှင့်အညိုရောင်သကြားတစ်ဦးထိတွေ့နှင့်အတူနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ frosted ဖျက်စီးရမဲ့ဂျုံဆမ်း။
လက်ပေါ်ဆော်လမွန်နှင့်ဆန်သီးနှံများ၏လုပ်နိုင်တဲ့ Keep နှငျ့သငျခဏရဲ့အသိပေးစာနှင့်အတူဤအလျင်မြန်-to-ပြင်ဆင်ချက်ဆော်လမွန် Patti လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သစ်ကြံပိုးစပျစ်သီးပျဉ် stuffing ပန်းသီး
တစ်ဦးကချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ, သစ်ကြံပိုး-အနံ့ stuffing ဤအနူးညံ့, အရည်ရွှမ်းပန်းသီးဖြည်။ ထိုကဲ့သို့သော Cortland, ဂရမ် Smith က McIntosh ယောနသန်, ရောမမြို့အလှအပ, အင်ပါယာ, ဖူဂျီသို့မဟုတ် Gala အဖြစ်ကောင်းစွာဖုတ်ကြောင်းပန်းသီး, ကိုရွေးချယ်ပါ။
Citrus ပြင်ဆင်ပြီးသုံး, ဆဲလ်ဆာသို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းငံပြာရည်နှင့်အတူဤအ crunchy, မီးဖို-ဖုတ်ငါးတန်းအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ဒါဟာ Up ကိုနှိုးဆော်
စိတ်ကူးများအတွက် WIC စီရီရယ်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အရသာပေါင်းစပ်
: P, B နဲ့ J ကို Dip
သစ်ကြံပိုးခေါက်က Apple ညတွင်းချင်းဂျုံ
စတော်ဘယ်ရီအမှောင်ချောကလက် Pudding Parfaits
တူနာငါး croquettes ဒီမီးဖို-ဖုတ်ဗားရှင်းလျော့နည်းအဆီပါဝင်သော်လည်းအပေါငျးတို့သအရသာနှင့်ရိုးရာ croquettes ၏အကြပ်အတည်း။
သစ်ကြံပိုး-Sweet အာလူး Dip
တစ်ဦးကအမြန်ပြင်ကြီးမြတ်ပြင်သစ်ကင် crispy စေသည် cheat နှင့်အတွင်းပိုင်းအပေါ်ပျော့
ပြင်သစ်ကင်အောင်လိုက်တဲ့အခါသင်သည်သင်၏ကြက်ဥအရောအနှော၌သူတို့နှစ်ပြီးသောင့်ပြီးနောက်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြောင်းဖူးအလွှာအတွက်အချပ် coating ၏ရိုးရှင်းခြေလှမ်းထည့်ပါ။ လျင်မြန်စွာကြည်လင်ပြတ်သားစွာနှင့်ပြင်ပတွင်အပေါ် crunchy သည်အထိချက်ပြုတ်ရန်သင့်ဒယ်အိုးမှလွှဲပြောင်း။
တစ်ဦးချင်း Peach ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ
ဤလွယ်ကူသောအမြန်-and တစ်ဦးချင်းအချိုပွဲနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့မက်မွန်ရာသီအခမ်းအနားကျင်းပ။ သို့မဟုတျ, အရှိန်အဟုန်တစ်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်, မနက်စာအဘို့ထိုသူတို့ဝတ်ပြုကြလော့။
ဘဝက hack ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နည်းနည်းနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအနိမ့်ဘတ်ဂျက်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ကသင့်ချက်ပြုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့အမျိုးမျိုးကိုဆောင် ခဲ့. ကူညီရန်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်ကျန်းမာ, အရသာအစားအစာများဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။